ပူးတစ်ကောင် ရဲ့လက်ရာ: @ မျက်မမြင် ကောင်မလေးသို့ 
@ မျက်မမြင် ကောင်မလေးသို့ 
တစ်ခါကမြို့ ငယ်လေးတစ်မြို့ မှာ အရမ်းကို ချောမောလှပတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သနား စရာ ကောင်းတာက အဲဒီကောင်မလေး ဟာ မျက်စိမမြင်ရှာဘူး ။ ပြီးတော့ သူ့ မှာ မိဘတွေလဲ မရှိတော့လို့အဒေါ်တစ်ယောက်နဲ့ အတူ နေရတယ် ။ အဒေါ်ကလဲ စီးပွားရေး လုံးပန်းနေရတာကြောင့် သူ့ ကို အဖော်ပြု မပေး နိုင်ဘူးပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့အဲဒီကောင်မလေးဟာ အထီးကျန်မနေပါဘူး ။ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ သူ့ အနားမှာ အမြဲပဲ အဖော်ပြုပေးနေတဲ့ သူနဲ့ ရွယ်တူ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိနေလို့ ပါပဲ။အချိန်တွေ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေးကို လေးနက်တဲ့ မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန် နဲ့ ချစ်မိပါတော့တယ် ။ အဲဒါကြောင့် တစ်နေ့ မှာတော့ သူမကို ချစ်ခွင့်ပန်လိုက်တယ် ။
“ ငါ နင့်ကို အရမ်းချစ်တယ် ကောင်မလေးရယ် ”
“ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ကောင်လေးရယ် ”
“ ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရတာလဲ ဟင် ”
“ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ငါက မျက်မမြင် ဖြစ်နေလို့ ပေါ့ဟာ။”
ကောင်လေးဟာ သိပ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ် သွားတယ်။
“ အားမငယ်ပါနဲ့ကွယ် ။ ငါ နင့်ကို တစ်သက်လုံး စောင့်ရှောက်သွားပါရစေ။နင့်ကို လက်ထပ်ပါရစေ။ ”
“ ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ငါ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောရမှာပေါ့ ။ ငါ မျက်လုံးကွယ်နေသရွေ့ငါဘယ်သူ့ ကိုမှလက်မ ထပ် ဘူး။ ”
တစ်နေ့ မှာတော့ ကံကောင်းခြင်းတွေဟာ အစပြုလို့ လာပါတယ် ။ မျက်ကြည်လွှာ အလှူရှင် ပေါ်ပေါက် လာခြင်းပါပဲ။ ကောင်မလေး ဟာအဲဒီနေ့ ကို တိတ်တခိုးမျှော်လင့်နေခဲ့ရတာကြာပါပြီ ။သူ့ မ ဟာအဲဒီ သတင်း ကိုကြားတော့ ပျော်လွန်းလို့အိပ်တောင်မပျော်နိုင်ပါဘူး ။ နောက်တစ်နေ့ မှာ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်စိ ကို ခွဲစိတ် ကုသကြပါတယ် ။ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် ။ပတ်တီးဖြည်မဲ့နေ့ မှာ ကောင်မလေးစိတ်တွေ သိပ်ကို လှုပ်ရှားနေပါတယ် ။ သူမ ဘယ်သူ့ ကို အရင်ဆုံးမြင်ရမလဲ ? သူမ ဘယ်သူ့ ကို စပြီးမြင်ချင်သလဲ ? ကောင်လေး ဆိုတဲ့ အတွေးဟာ သူမ နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်သွားပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ လောကကြီးဟာ မထင်မှတ် ထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာတွေ သူမကို စပေးပါတယ် ။ သူမ လုံးဝ မသိထားတဲ့ အရာတစ်ခုက ကောင်လေး ဟာလဲ သူမနဲ့ ဘ၀တူ မျက်မမြင် တစ်ဦး ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ ။ နောက်တစ်နေ့ မှာ ကောင်လေးက ကောင်မလေး အနားကို ရောက်လာပြီး မေးတယ် ။
“ နင် သိပ်ပျော်နေမှာ ပဲနော် ... ”
“ အင်း...အရမ်းကို ပျော်နေတယ် ။ နင် သိရဲ့ လား ? ငါ ဒီနေ့ မှန်ကြည့်တော့ ငါ... သိပ်လှတာပဲ ”
ကောင်မလေး ဟာ အရမ်းကို မြူးတူးပျော်ပါးနေတယ် ။ ကောင်လေးလဲ ပျော်နေတာပါပဲ ။
“နင် အခု ငါ့ကို လက်ထပ်နိုင်ပြီလားဟင် ” ကောင်လေးက မျှော်လင့်ချက် အပြည့်နဲ့ မေးလိုက်တယ် ။
ကောင်မလေး ရဲ့ အပျော်တွေဟာ ရုတ်တရက် ရပ်တန့် သွားတယ် ။ ပြီးတော့ သူမ တွေးတယ် ။ “မျက်မမြင် တစ်ယောက်နဲ့ငါတစ်သက်လုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေသွားနိုင်ပါ့မလား ?” သူမ ခေါင်းခါမိတယ် ။
“စိတ်မကောင်းပါဘူး ကောင်လေးရယ် ။ ငါ နင့်ကို လက်မထပ် နိုင်ဘူး ။”
ပြောရင်းကောင်မလေး ဟာအဝေးကို ထွက်ပြေးသွားတယ် ။ ကောင်လေးကတော့ အံ့အားသင့်မှုတွေနဲ့ ပေါ့ ။ဒီ လို နဲ့ ကောင်မလေး ဟာ တခြားကောင်လေး တစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တယ် ။ ကောင်လေး အတွက် တော့ မမျှော်လင့်နိုင် လောက်အောင်ပါပဲ ။ သူ့ ရင်ထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ စကားတွေ ပြောနေမိတယ် ....
“နင့် ကို ချစ်လို့နင့်ရဲ့ ဆန္ဒတွေအားလုံးကို ငါလိုက်လျောခဲ့ပါတယ် ကောင်မလေးရယ် ။ ငါ့အတွက်တော့ နင့်ကို ချစ်နေခွင့် ရနေတာ ၊ ငါ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့နင့်အတွက် အလင်းရောင်တွေကို ဖန်ဆင်းပေးနိုင် ခဲ့တာကို ပဲ ငါတစ်သက်လုံး ကျေနပ်နေမှာပါ.....”
[ဘာသာ ပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။]
အင်း....ဒါလဲ “အချစ်” ပါပဲလေ...
@ group policy မှ drives: များကို ပိတ်ခြင်း၊ ဖျောက...
@ ၁ ကနေ ၁၀
@ folder လေးတွေကို အလှဆင်ချင်ရင်
@ icon လေးတွေ ချိန်းကြစို့ လား
@ what is 1437 ?
@ သား နဲ့ ဖေဖေ
@ မှတ်မှတ်ရရ ဟာသလေးများ (၂)
@ သင့်ချစ်သူ က ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
@ မှတ်မှတ်ရရ ဟာသလေးများ(၁)
@ GOOD NIGHT
@ HUSBAND , WIFE and FAMILY
@ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး(၂)